Qoysas fatahaadda ka soo barakacay oo la dajiyay tuulada Buulogaduud - Radio Ergo
(ERGO) – In ka badan 200 oo qoys oo tan iyo horraantii bishii May ee sanadkan barakac ku joogay deegaanka Buulo-gaduud ee gobolka Jubbada hoose markii fatahaadda wabiga Jubba ay baabi’iyay beerahoodii ayaa did-u-dajin loogu sameeyay duleedka deegaankaas. Qoys kasta waxaa la siiyay lacag uu ku dhisto hal qol iyo dhul ka kooban 20-mitir oo dherer ah iyo 10-ballac ah.
Madiina Muuse Cali oo ka mid ah dadka ka faa’iideystay dib-u-dajinta ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in wax ka badan 7 bil iyada iyo carruurteeda oo sagaal ah ay ku noolaayeen balbalo yar oo qoys daggan Buulo-gaduud ay ka siiyeen qayb kamid ah gurigooda.
Madiina oo lagu taageeray lacag dhan $145 waxaa loogu daray alwaax, jiinkado iyo teendhooyinka ay ku dhisatay gurigeeda. Waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guriga iyo dhulka la siiyay.
“Hoy annagu aan leenahay baan ku hoyanaynaa awal dad ayaan dulsaarnaan jirnay, hadda waan ka baxnay xor baan noqonay cid kula hadli maleh. Aad baan uga mahad naqaynaa, layr baa nasoo gashay, waxaan dhistay qol iyo qol jiko iyo waab carruurtu ay ii harsadaan”.
Qoyska Madiino oo kasoo barakacay deegaanka Buula-kuusow oo dhinaca galbeedka ka xiga tuulada Buulo-guduud oo Kismaayo u jirta 30km waxa ay halkaas ku lahaayeen beer 4 hectar ah oo dalagyo kala duwan ay ku beeran jireen, balse fatahaadda wabiga Jubba oo soo laalaabatay ay wax yeelaysay.
Nolol-maalmeedka carruurteeda waxa ay ka soo saartaa shaqo dhar-dhaqaal ah oo maalintii ay ka hesho 50,000 oo shilin Soomali ah waxaana intaas u wehlisa $80 oo bishii saddexaad ay qaadanayaan qoyska Madiino iyo qoysaska kale ee soo barakacay.
Madiina waxa ay rajaynaysaa in ay qayb kamid ah lacagtaas oo ay bixiso hay’adda NRC bil walba ay dhigaal sato si ganacsi fudud ugu samaysato.
“Waxaa ii qorshaysay in aan ganacsado, yaanyada iyo bocorka beeraha aan ka soo qaatoo miiskoo yar aan banaanka dhigto oo ku gato, macaamiil baan ka dhiganaya beeraha, waxaan rabaa wax in aan ka soo qardaysto oo aan u caddeeyo qofkiisa oo faa’iidada yar ee iiga soo baxda ilmaha shaax uga dhigto”.
Mashruuca guryaha lagu dhisay waxaa Fulisay hay’adda NRC waxaana dhaqaalaha ku baxay bixisay hay’adda SIDA, maamulka Jubbalandna waxa uu ku deeqay dhulka.
Guddoomiye ku xigeenka Hay’ada Barakacayaasha iyo Qaxootiga Jubbaland Maxamed Sheekh Khadar ayaa sheegay in qoysaska dhulka la siiyay laga caawindoono billowga sanadka cusub warqadaha lahaanshaha dhulka, toddobaadkii labaad ayay daganyihiin guryahooda qoysaskan dib-u-dajinta u baahnaa.
Tirada qoysaska soo barakacay ee ku nool Buulo-gaduud oo dhamaantood beeralay ahaa waa 320 sida uu sheegay guddoomiyaha tuuladaas Mahad Mataan Buule. Intaas waxa uu ku daray in qaarkood ay dulsaar ku ahaayeen qoysas ehelkooda ah halka inta kale daafaha deegaanka buushash ay uga dhisnaayeen.
Waxa uu sheegay in 100-ka qoys ee aan wali helin dib-u-dajinta wajiga labaad oo la qorshaynayo sanadka cusub ay kamid noqon doonaan dadka hela, balse hadda ay doorteen kuwii ugu liitay dhanka hoy la’aanta.
“Hay’adii waa noo timid oo intaas ayaan rabnaa ayey na dheheen, hadee waad mahadsantihiin ayaan idhaahday intaas hadaad iga qaadeen inta kale-na hay’ad iyo wax kale ayaa imaan doona”.
Ibraahim Aadan iyo qoyskiisa oo 6 qof ah, waxa ay soo maciin bideen dabayaaqadii bishii May deegaanka Buulo-gaduud, markii ay ku adkaatay nolosha deegaanka Laan-abaar oo beer 6 hectar ah uu ku lahaa, waxa uu sheegay in uu ka quustay tacabashada beertiisa oo xili roobaad kasta qasaare uu kala kulmayay.
Markii deegaanka Buulo-gaduud uu yimid ayuu sheegay in uu dhistay guri cooshad ka samaysnaa oo halka uu ku yaallay ay ahayd boos dad leeyihiin, taasi oo walwal ku haysay sida uu ku sii daganaan doono ka hor inta uusan helin dhulka iyo gurigiisa cusub. Waxa uu tilmaamay in ay u dheerayd dayaca hoyga uu daganaa oo aan roobka celinkarin.
“Maaddama aan ahaa nin meelo dadow ku jiray hadda dhulbaa la isiiyay. Shalay waxba mahaysanin barakac baan ahaa, laakiin maanta guri aan leeyahay iyo boos baan leeyahay. Waxaa galaya saddex qol oo min 4mitir ah, geedahaan ku dhisay waxaa weeye Gamoor Mardo iyo Raqiis geedaha la dhoho korna waxaa ka saaran bacahaan UN-ka la dhaho”.
Ibraahim nolol maalmeedka carruurtiisa waxa uu ka hela lacago maalin dhaaf ah oo uu ka helo beer uu leeyahay nin kamid ah dadka deegaanka oo uu ka shaqeeyo, taasi oo raashin uu ugu iibiyo qoyskiisa.
Guddoomiye ku xigeenka Hay’ada Barakacayaasha iyo qaxootiga Jubbaland Maxamed sheekh khaddar ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in hay’ada ay ka codsadeen in dadka fatahaadaha ka barakacay la caawiyo mashruucaana uu noqday midkii ugu horeeyey ee ka soo jawaaba qayla dhaantii ay direen oo dhinaca hoyga iyo cunnada u badnaa.
Waxa uu sheegay in qoysaskan noloshooda waxbadan ay ka taridoonaan dhulka iyo hoyga la siiyay maaddama ay kamid ahaayeen waxyaabaha ay baahida wayn ay u qabeen.
“Ruuxii ka baxa dulsaarka oo meel isagu leeyahay daggan, ciddii kale ee taageeraysa meel fiican oo ay ka sii wadikarto buu helyaa, marka waxaan isniri waa tallaabo horay loo qaaday, sidii hore aad bey uga baddalnaanayaan wax wayna way u qabatay annaka la joognay ma qiyaasikartid waxa ay u qabateen”.
Iskuul la'aan iyo shaqo la'aan ka jirta degaanka Xaafuun kadib duufaantii Gati